Home Wararka Khadra : Ka hor-tagga baaritaanka Ikraan Tahliil,
Khadra : Ka hor-tagga baaritaanka Ikraan Tahliil,
Khadra Ducaale oo horay uga tirsaneyd Golaha Wasiirada ayaa Barteeda Facebook ku qoratay qoraalkan hoose oo ah mid ay dareenkeeda kula wadaagtay reerka la siyaasadeystay Xanuunkooda oo weli caddaallad loo diidan yahay Gabadhooda Ikran Tahliil. waa reer Dr. Tahliil, waxayna kala gubatay xanuunka ay marayaan oo ay horay u soo mareen reerkeeda.
Qoraalkan oo English ku qornaa ayaan goosannay inaan idiin tarjumno.
“Ka hor-tagga waayitaanka Ikraan Tahliil, waxay kicisay xasuus madaw oo ku saabsan maqnaanshaha adeerkay Siciid Cabdulqaadir Faarax. Wuxuu ahaa hooyaday walaalka ay hooyadey ugu jeceshahay waxayna ahaayeen kuwo si cajiib ah isugu dhow. Waxaa lagu waayay magaalada Muqdisho 1-dii Luulyo 1969-kii, wuxuu ka soo baxay gurigiisa, wuxuuna kala qeyb galayey dabaal-degga 1-da Luulyo saaxiibo ay aad isugu dhowaayeen. Saaxiibadiis ayaa ku sheegay in ay ku soo dhigeen gurigiisa hortiisa dabaal-deggii ka dib. Nasiib darro, abti Siciid ilaa maanta waa la la’yahay, qoyskeenuna ma helin geeri iyo nolol toona.
Waxa uu ahaa walaal la jecel yahay , adeer la jecel yahay, iyo saaxiib daacad ah. Markaas ayuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Cambridge, wuxuuna ka howlgalayay magaalada Muqdisho. Waxa uu ahaa mid aad u caqli badan, qurux badan, nimco badan, birlabaysan oo soo jiidasho leh. Waxa uu ahaa qof aragti dheer oo qalbigiisa aad ugu xeel dheer yahay . Waxa uu si xamaasad leh ugu dhuundaloolay dimuqraadiyadda, xuquuqaha madaniga ah iyo xuquuqul insaanka dhammaan inta ku nool Geeska Afrika – sidii dareenku ahaa lixdameeyadii.
Qoyskaygu waxay raaceen diin ahaan, waddo kasta oo meel kasta ka baadhayay si macquul ah – ama aan macquul ahayn – si loo helo isaga. Waxaa jiray sheekooyin badan oo been abuur ah, aragtiyo badan oo noqday been abuur, tani waxay sii dabadheereysay xanuunka qoyska. Waddo kasta oo ay heli kareen wuxuu horseeday dhammaad dhintay. Maalmuhu waxay isu rogeen bilo, bilihiina sannado ayay isu beddeleen, hadda tobaneeyo sano ayaa ka soo wareegay.
I rumayso, xanuunka qoyska iyo xanuunka wadnaha, wali waa taagan yahay oo waxa uu dareemayaa naxariis. Tobannaan sano ayaanu is weydiinaynay, halkee ayuu joogi karaa? Maxaa ku dhici karayey? Su’aasha muhiimka ah ee ah in uu nool yahay ama dhintay, weligeed lagama jawaabin. Walaalihiis weligood, ma aqbalin maqnaanshihiisa, qoyskiisana sidaas oo kale ayay u naxsan yihiin.
Tani waa xanuun aanan la jeclaan lahayn cadowgayga ugu xun. Waad sabreysaa marka aad aasto qofka aad jeceshahay. Laakiin Ilaa ay taas ka dhacdo, waxaad ku joogeysaa adigoo baadi goobaya si aan dhamaad lahayn, xanuun badan, cillado joogto ah, oo aad la daalaa dhacayso iyo wax kasta oo aan la garanayn – Maxay, Sidee, Yaa, Halkee – Maskaxdaadu way sii socotaa, su’aalahana waxay ku sii badanayaan madaxaaga.
Waxaan gudahayga ka doodayey muddo bilo ah, bal inaan si guud xanuunka qoyska ula wadaago iyo in kale. Waxaan dareemay inaan sidaas yeelo! Waxay u baahday geesinimo waxayna ahayd mid aad u adag, in dib loo soo nooleeyo xasuus xanuun badan, oo aan waligood loo oggolaan inay bogsadaan.
Waxaan si qoto dheer u aqoonsannay heer shaqsiyeed, xanuunka & qalalaasaha Qoyska Tahliil. Waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba, inuu arko arrintan, hor iyo horraan qoys ahaan oo dhibaato haysato. Arrinkan si cajiib ah ayaa loo siyaasadeeyay, illaa xad aan yareyno sheekada curinta aadanaha, oo aan diiradda saarnay inta badan siyaasadda. Qaar baa su’aal ka keenay, waddan ay ka dhacday caddaalad darro iyo colaad, maxaa ka dhigay sheekada Ikraan mid ka duwan?
Habkan fikirka ah ayaa kaliya dhibane u ah qoyska, waxayna daaha ka qaadaysaa dulqaadkayaga rabshadaha iyo cadaalad darada ka jirta Dalkeenna Hooyo. Waa inaan dhamaanteen dalbanaa cadaalada, qoyska oo aan dejinno siyaasad si aan uga fogaano qoysaska kale inay la kulmaan xanuun iyo dhib la mid ah.
Qoysku wuxuu u baahan yahay waa in la siiyaa taas oo soo afjarid, wax kasta oo ka yar ayaa ah in lagu xukumo qoyskeeda inta ay nool yihiin xanuun iyo jirdil. Waxaan ku noolayn xanuunkan, waxaanan u aqoonsannahay xanuunkooda inuu yahay xanuunkeenna
Waxaan qabaa su’aal ah, ma ogtahay halka ay ku sugan yihiin kuwa aad jeceshahay maanta?
Haddii aad ogtahay aad ayaad u nasiib badan tahay waana inaad xisaabisaa wannaagaas.
In la helo Nabad iyo Caddaalad waa waddada kaliya ee lagu gaari karo horumar.”
Khadra Ducale Wasiir hore.
Dad Shacab ah oo ku geeriyooday qarax lala beegtay Bajaaj ay saarnaayeen